‘प्रिय, डाक्टर साप, तिमी लाख-लाख वर्ष बाँच, कहिल्यै नमर्ने म्याग्नोलिया फूलजस्तै बाँच ! – Todays Nepal
मन्त्री डा. देवकोटालाई लिएर म बीबीसी रेडियोको मुख्यालय ‘बुसहाउस’ पुग्दा बीबीसी दक्षिण एसिया विभागका प्रमुख संवाददाता जर्ज आर्नी हामीलाई कुरिरहेका रहेछन् । अन्तर्वार्ता सकेपछि करिब दस मिनेटमा मन्त्री बाहिर निस्के । उनको अनुहार रातोरातो थियो । बीबीसीका अनुभवी पत्रकारले देवकोटाजस्ता वाचाल व्यक्तिलाई पनि अप्‍ठ्यारो पारेका थिए ।
तर, उनको धारणा स्पष्ट थियो । जवाफ सटीक र चाखलाग्दो थियो । भने, ‘नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने हो भने त्यसको थालनी वीर अस्पतालबाटै गर्ने हो । ’नेपालको जेठो अस्पतालको रामकहानीको उनी स्वयम् जो भुक्तभोगी थिए । वीर अस्पताललाई नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठानमा रूपान्तरण गर्ने सोचाइ डा. देवकोटामा त्यसबेलादेखि नै थियो । त्यस्तो ‘भिजन’ थोरैमा मात्र देख्‍न पाइन्छ ।
‘मन्त्री हुँदैमा मैले प्राक्टिस कहाँ छोड्या छु र ? वीरमा हप्‍ताको एक दिन जटिल शल्यक्रियामा जुटेकै छु,’ उनले थपे । म उनको ऊर्जा, लगन र सेवाप्रतिको भावबाट नतमस्तक भएँ । विधिको विडम्बना, विधाता स्वयंले अहिले डा. देवकोटासँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको छ । लाखौं मानिसलाई पुनर्जीवन दिएका डा. देवकोटा अहिले आफैँले कठिन मिहिनेत गरी सिर्जना गरेको नेपालकै उत्कृष्‍ट न्युरो अस्पतालको सघन उपचारकक्षमा जीवन–मरणको दोसाँधमा छन् । तर, उनको आत्मबल पहिलेजस्तै अदम्‍य छ, जीवन र जगत्प्रति उनको दृष्‍िटकोण छर्लंग छ, अनि देश र माटोप्रति उनको अगाध माया छ ।